Iindidi zeendlela kunye nokuba zeziphi
yokuqalisa >> Iindlela
Indlela siseti yamacandelo okanye izixhobo ezivumela ukuba senze umsebenzi, oko kukuthi, ukuhambisa okanye ukuguqula intshukumo.
Kubonakala ngathi kwiminyaka ye-elektroniki uyile ngasemva, kodwa ukubaluleka kwayo kusabalulekile, kuba nayiphi na indalo ekufuneka iziswe kwinqwelomoya iya kufuna iindlela, nokuba zingakanani na.
Iindlela zifundwe ukusukela kumaxesha amandulo kwaye ziyaqhubeka kwaye ziya kuba lelinye lamacandelo ayimfuneko kwinto yakho njengomqambi.
Ubunjineli, i-mechatronics, iirobhothi zifuna iindlela. Zingaphi ezinye izinto ozaziyo kwaye oziqondayo ukuba zisebenza njani imithetho ephathekayo, yenzelwe ntoni kunye nendlela ezisebenza ngayo, uninzi lwezinto onokukhetha kuzo kunye neendlela ezintsha ezilungiselelwe iprojekthi oza kuba nakho ukuyenza.
I-lever yindlela, i-cam, i-Archimedean screw. Siza kungena kwihlabathi elinomdla ngokwenene. Kwaye aziloncedo kuphela kulwenziwo, abenzi, amagcisa, kunye nezinye izinto ezininzi zokuyila kufuneka zazi ngazo nokuba azikakuqondi oko okwangoku.
Iindidi, ukuhlelwa kunye nemizekelo yeendlela
Square umngxuma ukuzama kancinane
U-Eduardo Mier undilumkise ngevidiyo enomdla kakhulu afuna ukukubonisa yona. Kukubhola kwe ... Qhubeka nokufunda
Iindlela ezimbalwa zakudala
Ngale khonkco le-UJI (iUniversitat Jaume I) Kulungile sinokubona oopopayi beendlela esizithathela ingqalelo ... Qhubeka nokufunda
Into yokuqala yokubulela abantu twitter endincedileyo kuguqulelo lwesihloko I-Trammel yeArchimedes, ethe ekugqibeleni yahlala njengeArchimedes Compass. Siqwalasele i «Archimedean trammel» kunye nenye indlela «Archimedean Lattice».
Enkosi kakhulu ku @Februwari 1, @zamakangcobo, @ V4nhel nalowo ufumene inguqulelo @ScienceKanija
Ke masibone esinokukwenza
Iindlela zikaJansen kunye nezidalwa
ndiphakathi Amandla oGeometri Ngevidiyo yeendlela zikaJansen.
Kwaye ilizwe elitsha liyavuleka ukuze liphonononge. Kuzelwe uthixo omtsha ukuba anqule :)
Uyenza njani iindevu zoomatshini
Sikufumene oku kubabazekayo amadevu oomatshini, esibonisa ukuba akulunganga ukuba netekhnoloji ephezulu kakhulu okanye izixhobo ezininzi, ukufumana iziphumo ezimangalisayo.
Sifuna intelekelelo eninzi :)
Indlela yokwenza umthombo wasekhaya weHeron
Sibonile Clepsydras, la Eolipilla okanye Aeolus kaHeron, kodwa sasingekayiboni i- Umthombo kaHeron ongumatshini wamanzi owenziwe nguHeron waseAlexandria (Inkulungwane yokuqala ye-physicist, imathematika kunye neinjineli) ulwelo olunamandla.
Eyona nguqulelo indala, kaHeron, yayimi ngolu hlobo lulandelayo.
Umsebenzi ulula kakhulu.
Amanzi awe esuka ku-A aye ku-C (azaliswe ngumoya nomoya ongena-moya) kwaye atyhala umoya ku-C usiya ku-B (uzaliswe ngamanzi), otyhala amanzi esiya ku-A.
Kulungile emfanekisweni sineothotho lwezivalo eziluncedo kuthi ekuqaliseni inkqubo yethu, nangona njengoko nizobona inokwenziwa ngakumbi ekhaya.
Ngokomfanekiso. Ekuqaleni sinezivalo ezintathu zivaliwe kwaye songeza amanzi ku-A.Sivula i-V2 kwaye itanki B iya kugcwaliswa kwaye ukuvulwa kwe-V3 kuya kuyizisa kuxinzelelo lomoya. Sivala iivaluva ezimbini kwaye sivule i-V1 ukuze umthombo uqale ukusebenza.
Oomatshini kunye neeprocket sprockets
Ndibhale malunga nama-500 amanqaku e-Ikkaro. Ndiyakuqinisekisa ukuba ndibone izinto ezimangalisayo, ngenxa yokuntsokotha kwazo, kuba ... Qhubeka nokufunda
Umatshini wokongeza okubini
Ngelithuba ndifumene iividiyo malunga ne- Umatshini wokongeza ibhastile o Umatshini wokongeza kanambambili ngamabhastile
Ndicacisa ukuba isebenza njani, nangona ijongeka intle kwezi vidiyo zimbini.
Umvelisi wetemplate ukwakha iigiye
Ukufunda iMicrosiervos, ndibone ukuba bebethetha ngesicelo sewebhu apho sinokuthi senze iitemplate zokwakha iigiya okanye ... Qhubeka nokufunda